Ciidamada Xoogaa Dalka oo gacanta ku dhigay ragii Sh.hoose Miinooyinka galin jiray wadooyinka oo ka tirsanaa shabaab. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Xoogaa Dalka oo gacanta ku dhigay ragii Sh.hoose Miinooyinka galin jiray...
Ciidamada Xoogaa Dalka oo gacanta ku dhigay ragii Sh.hoose Miinooyinka galin jiray wadooyinka oo ka tirsanaa shabaab.
Ciidamada Xoogaa Dalka gaar ahaan Kumaandooska Danab, ayaa gacanta ku soo dhigay 18- dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-shabaab, kuwaas oo qaabilsanaa in miinooyinka lagu aaso laamiyada ay ku safraan dadka shacabka ah.
Hawlgalka lagu soo qabtay dagaalameyaasha Al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyay gobolka Shabeelada hoose gaar ahaan deegaanada maguurto, Gumarrey, Kaxarrow, Doonka weynow, Doonyarow, Cadeyley, Lafagaale, Cumar Dheere.
Sidoo kale Saraakiisha hoggaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in raggan la qabtay ay Al-shabaab u qaabilsanaayeen inay miinooyinka ku aasaan inta u dhexeeyso degmada Afgooye iyo deegaanka Tixsiile ee gobolka shabeelada hoose
Previous articleMaydka Marxuum Cali mahdi oo lagu wado in la geeyo Somaliya iyo Qaban qaabo ka socota Nairobi.
Next article Sheekh Shariif oo soo saaray bayaan deg-deg ah oo uu kaga hadlayo abaaraha adag ee ka jira Gedo iyo sidoo kale tan ka dhalatay cudurka safmarka ah Covid-19
Madaxweynaha Joe Biden ayaa laalay wareegto uu hore u soo saaray madaxweynihii isaga ka horeeyay, taas oo hor istaagtay in badan oo ka mid...